သာလွန်ဇောင်းထက်| February 22, 2013 | Hits:32,812
| | ပြည်သူ့လွှတ်တော် တက်ရောက်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
အခြေခံဥပဒေကို NLD ပြင်လျှင် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ထောက်ခံမည်ဟု ဦးအောင်သောင်းပြောNLD ပါတီဝင်ဟောင်း ၄ ဦး လျှောက်လွှာတင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်းဆိုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ပေါင်းပြီး ဖွဲ့စည်းပုံဥပဒေ ပြင်မည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပြောထိုင်းအခြေစိုက် ရခိုင်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ မြန်မာပြည်ပြန်လူ့အခွင့်အရေး ရုပ်ရှင်ပွဲတော် မြန်မာပြည်အနှံ့ ခြေဆန့်မည် နောက်ဆုံးရ ရုပ်/သံများ
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> nonowaynever February 22, 2013 - 5:44 pm	we already decided.no noway never.
Reply	ရော​သ​မ​မွေ February 22, 2013 - 9:44 pm	” တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု၊ မဖြစ်မှုဆိုတာ ဒီနိုင်ငံကပဲ ဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာ နိုင်ငံတကာအဆင့်တော့ မီရမှာပေါ့”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောဆိုသည်။”
ခေါင်း​စဥ​ကို​လို​ရာ​ဆွဲ​မ​တတ်ပါ​နဲ့​။​ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့​ထဲမှာ၁၉၈၂ ခုနှစ် နိုင်ငံသားဥပဒေသည် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီတယ်​၊​မမီဘူး​လို့​မ ပြောပါ​ဘူး​။​နိုင်ငံတကာမှာ၈၂ဥပဒေ​လောက်သ​ဘော​ထား​မြ​ကီး​တဲ့​ဥပဒေ​တွြွေ​ပူ​ထား​တဲ့​နိုင်ငံ​တွေအများ
ြ​ကီး​ပါ​။အ​ထူး​သြ​ဖင့်​ဘယ်လို နိုင်ငံ​တွေက​တင်ြး​ကတ်တယ်ဆို​တာ​လေ့​လာ​စေြ​ခင်ပါ​တယ်​သူများ​ယောင်တိုင်း​လိုက်​ယောင်တဲ့​အ​ထဲမှာ​ဧ​ရာ​ဝ​တီ​မ​ပါ​စေြ​ခင်ပါ​ဘူး​။​Reply	swe htwe February 22, 2013 - 10:33 pm	We admire you ,Daw Su. But we don’t agree to you on that point. It is our national security. We think OIC countries should accept them to live in their countries if they really have goodwill. It isawin-win situation and we will be very grateful. Long live myanmar !!!
Reply	win then February 26, 2013 - 10:12 am	daw su just says blah blah to make pleased for usa … it is clear that she is doing just for burmese people .. not different from burmese junta than shwe and thein seine…. burmese people still think she is heroic …. now she and nld are same side with junta … brumese people no hope Reply	တခြားဖတ်စရာများ ဗုဒ္ဓဂယာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ တရားဝင်ဖြစ်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးတော့မည်